विश्वकपमा हेर्नलायक खेलाडीमा नेयमार ! यस्तो रहेको छ स्पष्ट लक्ष्य !
जेठ २८, २०७५ बिगुल
काठमाडौं – विश्व खेलकुदको सबैभन्दा चर्चित प्रतियोगिता, फुटबलको महाकुम्भ विश्वकप २०१८ जुन १४ देखि रुसमा सुरु हुंदैछ । ‘विश्वकपमा हेर्नलायक खेलाडी’ को सुचीमा रहेका छन् ब्राजिलका फरवार्ड नेयमार ।
ब्राजिलको १६ वर्षमा पहिलो पटक विश्वकप जित्ने बलियो मौका रहेको छ । ब्राजिलको टोली डिफेन्स र मिडफिल्डमा बलियो रहेको छ भने अग्रपंक्ति प्रतियोगितामा सबैभन्दा आकर्षक रहेको छ । त्यस अग्रपंक्तिको नेतृत्व गर्ने छन् पिएसजीका स्टार खेलाडी नेयमार ।
नेयमार केही वर्षदेखि बताइरहेका छन् कि बलोन डि’ओर जित्ने उनको लक्ष्य रहेको छ । बार्सिलोनामा लियोनल मेस्सीको छायामा रहेको महसुस गर्दै नेयमार पिएसजीतिर लागे । त्यहां पनि उच्च प्रदर्शन गरेका नेयमार सिजनको अन्तिमतिर भने घाइते भए ।
चोटिल भएका नेयमार विश्वकपमा फिट हुने नहुने अनिश्चित थियो । तर दुई मैत्रीपूर्ण खेलमा दुई सुन्दर गोलसंगै नेयमारले आफ्नो लक्ष्य स्पष्ट पारेका छन् – विश्वकप २०१८ । यदी विश्वकप जिताउन सफल भए नेयमार आफ्नो व्यक्तिगत लक्ष्य बलोन डि’ओरको पनि नजिक अवश्य हुने थिए ।
ब्राजिल विश्वकप समूह ‘ई’मा स्विट्जरल्यान्ड, सर्बिया र कोस्टा रिकासंग रहेको छ । समूह चरणमा खेलहरु तुलनात्मक रुपमा सहज भए पनि प्रतियोगिता अघि बढ्दौ जादाँ ब्राजिलको चुनौति भने कठिन हुंदै जानेछ । पछिल्लो विश्वकपको नमिठो याद पनि ब्राजिललाई भुलाउन छ र त्यसका लागि नेयमारले निकै महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्नु पर्ने हुने छ ।
प्रकाशित : सोमबार, जेठ २८, २०७५२०:०४
आज हुने विश्वकप २०१८ को उद्घाटन खेल कसले जित्छ ? बिरालोले गर्यो भविष्यवाणी, हेर्नुस् [भिडियो]
नेपाल विरुद्ध प्यालेस्टाइन – सम्पूर्ण जानकारी
सेञ्चुरी सुपर सिक्सेस क्रिकेट मंसिर दोस्रो सातादेखि
स्पेनविरुद्ध केनले गोल्डेन बुट लगाएर खेल्ने
फ्रान्सका विश्वकप विजेता कप्तान मापसे कारवाहीमा
राष्ट्रिय सफ्ट टेनिसमा मध्यमाञ्चल प्रथम
३२ मिनेट अगाडि पत्रपत्रिका
५६ मिनेट अगाडि पत्रपत्रिका